Sawiro: Ninka ugu da'da weyn oo taga xajka abid oo la soo dhoweeyay
Sawiro: Ninka ugu da’da weyn oo taga xajka abid oo sacuudiga lagu soo dhoweeyay
Related: Muslims Around the World Celebrate Eid al-Adha as Hajj Enters Final Days
Halkan hoose kadaawo sawirada laga soo qaaday soo dhoweyntii loo sameeyay ninka ugu da’da weyn oo taga xajka abid.
Sidoo kale sanadkan waxaa xajka u amba baxay Soomaali badan oo la filayo in ay soo gutaan waajibaadkooda xajka waxaa si heer sare usoo diyaarisay dowlada Federalka Soomaaliya.
Waxaa xujeyda lagu qaaday diyaarad aad u weyn oo ay leedahay Ethiopian Airlines taasoo aan nooceeda horay loogu arag garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade isla markaan duulimaad toos ah oo qaadanaya laba saac oo kaliya ay ku qaadatay xujeyda halka markii hore ay meelo badan oo transit ah sii mari jireen iyagoo weliba ku duulaya diyaarado yar yar.
Xujeyda ayaa sidoo kale ka caban jiray in qaarkood laga reebo safarkii ay isku soo diyaariyeen maadaama diyaaradaha ay ku dhoofayeen uu nidaamkooda liitay.
Iftiinkii nolosheyda Part 41 Saafi Films musalsal af soomaali
Qalbi qurbe kunool 39 Musalsal Af Soomaali
Wareysi dhinacyo badan taabanaya oo lala yeeshay Reysalwasaaraha Itoobiya.
WARKA 28 06 2020 Madaxweynihii hore Xasan Sh Maxamuud oo sheegay in gudiga doorashooyinka ay…